General Anaesthetic (မေ့ဆေးပေးခြင်း) - Hello Sayarwon
သင့်ကို လုံးဝသတိလစ်မေ့မြောသွားအောင် ဒါမှမဟုတ် ထုံနေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေး ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္ထုတွေကို မေ့ဆေးထုံဆေးလို့ခေါ်ပြီး အမျိုးအစားနဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ မေ့ဆေးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ လူနာဟာ ခံစားသိရှိမှု လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပြီး သတိလစ်မေ့မြောသွားမှာပါ။ ဒါမှသာ ခွဲစိတ်နေတာတွေကို မသိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ့ဆေး၊ထုံဆေး အမျိုးအစားအားလုံးဟာ အာရုံကြောတွေရဲ့ သတင်းအချက်အလက် လွှင့်ထုတ်မှုတွေကို တားဆီးနှောင့်ယှက်ပြီး အာနိသင်ပြတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မေ့ဆေး၊ထုံဆေးပေးထားချိန်မှာ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လှုံ့ဆော်နှိုးဆွမှုတွေကို ဦးနှောက်က မသိရှိ၊မတုံ့ပြန်နိုင်ဖူးဆိုတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေ့ဆေးကို မေ့ဆေးဆရာဝန်ကသာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲသင့်ပြီး ထိုးဆေး ဒါမှမဟုတ် အငွေ့အဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော ခွဲစိတ်မှုတွေကို ပြုလုပ်တဲ့အခါ မေ့ဆေးပေးရပါတယ်။ ဒါမှသာ ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသလို လူနာအနေနဲ့လည်း ဆရာဝန် ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်တော့တဲ့အတွက် ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ခွဲစိတ်ရမယ့် ခွဲစိတ်မှုမျိုးနဲ့ အတော်လေးနာကျင်နိုင်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေမှာ မေ့ဆေးကို အသုံးပြုရပါတယ်။ဥပမာ သည်းခြေဖယ်ထုတ်ခြင်း၊အူကျတာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း၊အဆီစုပ်ထုတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်ထုတ်ခြင်း စတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ့ဆေးက ဘာအန္တရာယ်တွေ ရှိသလဲ။
ကျန်းမာနေတဲ့သူအများစုအတွက် မေ့ဆေးက ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ယေဘုယျအားဖြင့် မေ့ဆေးကြောင့် ပြဿနာဖြစ်တာထက် အခုပြုလုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု နဲ့ သင့်ရဲ့ နဂိုမူလ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့် ပြဿနာဖြစ်တာ ပိုများပါတယ်။
မေ့ဆေးပေးထားသူ ၁၀၀၀မှာ တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ဟာ မေ့ဆေးပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခဏပြန်လည်နိုးလာတတ်တယ်လို့ သိရပြီး ဒါဟာ ခန့်မှန်းခြေကိန်းဂဏန်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနိုးလာရင် နာကျင်မှုကို မခံစားရပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်လုပ်ကိုင်နေတာတွေကို သိနေပါလိမ့်မယ်။
ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ မေ့ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြဿနာတွေက
· ဆေးထိုးတဲ့ နေရာမှာ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာဖြစ်ခြင်း။
· အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားခြင်း။
· အာရုံကြောများ ယာယီထိခိုက်ခြင်း။
· ဓါတ်မတည့်ခြင်း ပြဿနာများ ခံစားရခြင်း (ဥပမာ ရင်ကျပ်ပန်းနာထခြင်း)။
· ခွဲစိတ်နေချိန်မှာ နာကျင်မှုကို ခံစားနေရခြင်း၊သိနေခြင်း။
· ပါးစပ်၊သွား၊နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် လျှာတို့ကို ထိခိုက်မိခြင်း။
· အသံကြိုးများ သို့မဟုတ် အသံအိုးကို ထိခိုက်မိခြင်း။
· ရုတ်တရက် နှလုံးရောဂါထခြင်း။
· ခြေလက်အပါအဝင် တကိုယ်လုံး လှုပ်မရတော့ခြင်း။
မေ့ဆေးမပေးခင်မှာ ၎င်းရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို သေချာစွာ သိရှိနားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ မရှင်းလင်းတာ၊သိချင်တာတွေရှိရင် သင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို အချိန်မရွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
မေ့ဆေးဆရာဝန်က တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ပြီး မေ့ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ကာ ထိုးဆေး ဒါမှမဟုတ် အငွေ့အဖြစ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
· ထိုးဆေး — သွေးကြောထဲထိုးသွင်းထားတဲ့ cannula လို့ခေါ်တဲ့ ပလတ်စတစ်ပိုက် ပါးပါးလေးထဲကနေတဆင့် မေ့ဆေးကို သင့်သွေးကြောထဲ ထိုးသွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
· အငွေ့ — မျက်နှာအုပ်တဲ့ mask ကနေတဆင့် အငွေ့လွှတ်ပြီး ရှုခိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်နေစဉ်ကာလတလျှောက်လုံး သင့်ဘေးနားမှာ မေ့ဆေးဆရာဝန် ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး သင်ကောင်းစွာ သတိလစ်နေခြင်းရှိမရှိကို တချိန်လုံး ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ မေ့ဆေးကို ပြယ်သွားအောင် လုပ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်သတိရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေ့ဆေးစတင်ပြယ်တဲ့အချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊အချိန်၊နေရာနဲ့ လူတွေကို မသိခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကောင်းစွာ စဉ်းစားတွေးတောနိုင်မှု မရှိခြင်း စတာတွေကို ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ပဲဖြစ်လို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မေ့ဆေးရဲ့ အာနိသင် လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားဖို့ အချိန်နည်းနည်းတော့ ကြာပါလိမ့်မယ်။
လက်တွန်းလှည်း ဒါမှမဟုတ် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဝှီးချဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ကို အထူးခန်းထဲ ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကာ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်ဆေးပညာရှင်တွေက ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
General Anesthesia. http://www.webmd.com/a-to- z-guides/general- anesthesia-
topic-overview. Accessed July 16, 2016.
General anaesthesia. http://www.nhs.uk/conditions/anaesthetic-
general/Pages/Definition.aspx. Accessed July 16, 2016.